Qaar badan oo naga mid ah miisaanka cagtawaa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku saabsan miisaanka cagta.
Waxaan u isticmaalnaa tan miisaanka cagtashidma si ay u bixiso xalka tirinta cagaha ee fudud, fudud oo wax ku ool ah maktabado badan, matxafyada, goobaha muuqaalka leh, dukaamada silsiladaha, dukaamada waaweyn, iyo meelaha kale ee dalka iyo dibaddaba. Tanimiisaanka cagta sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xakamaynta deggenaanshaha otomatiga ah.
HPC015S miisaanka cagta waa aalad aad u yar-yar, batari ku shaqeysa, WIFI-gudbinta socodka rakaabka. Hal qalab oo keliya ayaa buuxin kara shuruudaha macaamiisha. Shaashadu way cadahay waana la cusbooneysiiyay waqtiga dhabta ah. Looma baahna kharashyo kale. Waxaad dooran kartaa habka isku xirka ama habka istaagida ah.
Markii mashiinka tirinta cagaha wuxuu adeegsadaa habka isku xirka, ka miisaanka cagtawaxay bixisaa barta shabakadda 'WIFI-AP' ee kulkulul iyo adeegga gudaha ee WEB. Ka dib markaad isku xirto oo aad gasho ogolaansho adoo adeegsanaya taleefan kasta oo smart ah (Android, IOS), isticmaal bogga WEB si aad u dejiso cabirka tiirarka tirinta socodka rakaabka Ama baari xogta, adeegaha ayaa soo koobaya oo bixinaya warbixinno falanqeyn kala duwan, oo ku xiraya nidaamyada dhinac saddexaad. ama kordhinta shaqada.
Dareemka 'Footfall sensor' wuxuu badbaadin karaa diiwaanka socodka rakaabka sida ku cad mudada go'an ee loo cayimay, wuxuuna ku shubi karaa diiwaanka socodka rakaabka serverka loogu talagalay si joogto ah sida ku xusan mudada go'an.
Miiska Kabaha sidoo kale waxay bixisaa taageero farsamo oo buuxda si looga caawiyo horumarinta dugsiga sare, wicitaanada API interface iyo horumarka labaad, oo bixiya dhameystiran mashiinka tirinta cagahahab maamuuska isgaarsiinta iyo taageerada farsamada ee la xiriirta, iyo habab kala duwan oo hagitaan xogta ah. Barxadku wuxuu adeegsadaa adeegeyaal xirfadlayaal ah si ay u bixiyaan codsiyo siman oo raaxo leh Khibrad, keydka xogta madax-bannaan ee xogta si loo hubiyo daacadnimada xogta
Midab Madow ama caddaan
Xiriirinta Wireless, taageerada moduleka Wifi
Ballaca ogaanshaha 1-20 mitir
Batariga ilaa 1.5 sano (batteriga caadiga ah ee caalamiga ah)
Software La heli karo
Xogta Hubinta habka Mobile ama PC
Maxaad u dooranaysaa miiska MRB?
1. Marka loo eego isbeddelada xogta socodka rakaabka ee ay xisaabisay miisaanka cagta, meelaha gaarka ah iyo muddooyinka gaarka ah waa la xukumi karaa, maamulka hantida, dayactirka iyo amniga ayaa si hufan loo qorsheyn karaa si looga fogaado khasaaraha hantida aan loo baahnayn.
2. Socodka rakaabka ee aagga weyn ee ay xisaabisay fdareeraha ootfall waxay bixisaa aasaas cilmiyaysan oo loogu talagalay qaabka isku dhafan ee aagga oo dhan.
3. Iyada oo loo marayo tirakoobka iyo isbarbardhiga qulqulka rakaabka ee xilliyo kala duwan, si cilmiyeysan loo qiimeeyo caqli-galnimada istiraatiijiyadda hawlgalka suuqgeynta dallacaadda
4. Iyadoo la falanqeynayo xogta ku jirta miisaanka cagta, si macquul ah u go'aamiso heerka qiimaha kirada dukaan iibsiga.
5. Marka loo eego tirada rakaabka ku go'doonsan aagga, kheyraadka awoodda aadanaha si macquul ah ayaa loo waafajin karaa si loo xakameeyo kharashka.
6. Soo bandhig aasaas cilmiyaysan oo lagu wanaajinayo miisaaniyadda xayeysiinta iyo kor u qaadista iyada oo loo marayo tirakoobka socodka rakaabka.
7. Iyadoo loo marayo dareeraha cagaha, celceliska awoodda kharashka ee socodka rakaabka waa la xisaabin karaa si loo helo tixraac loogu talagalay meelaynta alaabta.
8.Waxaa maraya mashiinka tirinta cagaha, Saacadaha shaqada si macquul ah ayaa loo dejin karaa oo waa la yareyn karaa khasaaraha.
Sidee miisaanka cagahu u shaqeeyaa?
Mabda 'tirinta: tiknoolajiyada kala-baxa, shucaaca infrared.
Habka loo soo rogo xogta: xogta loo diro serverka dariiqa iyadoo la adeegsanayo WIFI wireless.
Bandhigga xogta: OLED shaashad ballaaran ayaa soo bandhigaysa waqtiga-dhabta ah ee soo gelitaanka iyo bixitaanka xogta maalinta.
Baaxadda ogaanshaha: gudaha 1-20 mitir, bannaanka 1-16 mitir.
Habka tirinta: tirada qulqulka socodka iyo dibedda ee rakaabka waxaa loo tirin karaa si gooni gooni ah.
Habka u fiirsashada xogta: gali URL-ka mobilka ama PC-ga si aad u gasho bogga, u gal magaca koontada iyo lambarka sirta ah si aad u eegto, waxaadna ka heli kartaa xogta waqtiyada kala duwan ee daawashada.
Qaabka rakibaadda: hagaaji wariyaha infrared-ka iyo qaataha infraredka oo isku dherer ah labada dhinac ee kanaalka, kana ilaali carqaladeynta dhexda, dhererka rakibkuna wuxuu u dhexeeyaa mitirrada 1.2-1.4.
Qaabka Awoodda Awoodda: Soosaarida korantada ee USD, korantada lithium ee korantada dib u soo celin karta (waxaa loo isticmaali karaa qiyaastii 3 bilood ka dib lacag bixin).
Xogta qalabka ee dukaamada kala duwan waxaa lagu eegi karaa isla isla koontada, isla marna la maareyn karaa, isbarbar dhigna xogta waa lagu sameyn karaa.
Xakamaynta deggenaanshaha waxaa dejin kara miisaanka cagta software.
HPC015S fiidiyowga miisaanka lidka ku ah
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah miisaanka cagta, 2D, 3D, AI miisaanka cagta, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon miisaanka cagta adiga 24 saac gudahood.
Hore: MRB USB mashiinka tirinta bini'aadamka ee tafaariiqda HPC015U
Xiga: Dadka dijitaalka ah ee MRB waxay ka hortagaan HPC005U